अमेरिकाले भन्यो कोषको उपलब्धता सधैँ खुला नरहने अब के हुन्छ एमसीसी? - Sabda Nepal
अमेरिकाले भन्यो कोषको उपलब्धता सधैँ खुला नरहने अब के हुन्छ एमसीसी?
२०७७ असार १६, मंगलवार ०९:१७ गते
काठमाडौं । नेपालको संसदबाट विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) पारित हुन सकेको छैन त्यसपछि अमेरिकाले कोषको उपलब्धता सधैँ खुला नरहने भनेको छ।
‘अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्’ अमेरिकी दूतावासले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकाशित : २०७७ असार १६, मंगलवार ०९:१७ गते